IGalicia ifuna ukuhola ekukhiqizeni amandla avuselelekayo eSpain | Ukuvuselelwa Okuhlaza
UTomàs Bigordà | | I-Biomass, Amandla omoya, Amandla we-geothermal, amandla wokubacindezela, Amandla avuselelekayo
UMnu Alberto Núñez Feijóo, umongameli weXunta uyaqiniseka ukuthi iGalicia, "mhlawumbe kanye neCastilla y León", izophinda futhi ihole ukukhiqizwa kwamandla avuselelekayo eminyakeni ezayo.
Okwamanje, maqondana nomkhakha womoya, umgwaqo womgwaqo iXunta de Galicia ucabanga ukuthi ngonyaka we-2020 zisebenza eduze kuka-4GW wamandla.
Inhloso ukufinyelela ema-megawatts ayizi-6.000 eminyakeni eyishumi ezayo, ngenxa yezikhungo ezihlinzekelwe eMthethweni Omusha Wokusetshenziswa Kwebhizinisi. Ngokusho kweXunta, kuzosho ukuthi i- ngaphambi nangemva yabo bonke abafuna ukutshala imali eGalicia, emkhakheni wokuvuselelwa kodwa nakweminye imikhakha ekhulayo yomnotho wethu.
Phakathi kwezinto ezintsha ezihlongozwe yilo mthetho, umongameli wesifunda wagcizelela ukuthi usungula isibalo sokwehlukanisa leyo misebenzi yezimboni ebhekwa njenge isithakazelo esikhethekile okomphakathi. Ngale ndlela, kwenziwa umzamo wokukhuthaza ubuhlakani bokuphatha ekuqhubekisweni.
Eqinisweni, amapaki ayi-18 esevele emenyezelwe njengamaphrojekthi anentshisekelo ekhethekile, okuyi-12 isivele igunyaziwe. Ekugcineni, lokho esifuna ukuthi izinkampani zibhejele iGalicia, kungeze umongameli wesifunda, ngaphezu kokugqamisa lokho Amandla avuselelekayo bahlinzeka cishe u-90% kagesi osetshenziswa ngamaGalician, ngenkathi bemele u-4,3% we-GDP yendawo.
Okunye okusha okwethulwe yiBusiness Law ukwakhiwa ngo-Okthoba owedlule kwerejista yomoya yaseGalician, lapho isicelo sokuqoshwa kwamamegawathi ayi-1,126 sesivele siqoshwe
0.1 Ipulazi lomoya laseMalpica
1 Thuthukisa kwamanye amandla avuselelekayo
1.1 Isu Lokukhuthaza I-Biomass
2 Ugesi ophehlwa ngamanzi
3 Sebenzisa i-Geothermal
Ipulazi lomoya laseMalpica
UMnu Feijoo, usebenzise ithuba lokuvakasha kwakhe ukubeka ipulazi lomoya laseMalpica njengesibonelo sephrojekthi ebandakanya "ukuzibophezela okuphindwe kathathu": ezemvelo, ezomasipala - ngoba ivumela ukudala amathuba emisebenzi emikhandlwini yesifunda - futhi, ekugcineni, iyakuqinisekisa ukuzibophezela kukaHulumeni kokuvuselelwa kabusha, ngokuba yipaki lesibili elizonikwa amandla kabusha endaweni.
Thuthukisa kwamanye amandla avuselelekayo
Akubalulekile kuphela ukuthi amandla omoya abalulekile, iXunta nayo izama ukukhuthaza amanye amandla avuselelekayo. Eqinisweni, eGalicia kunombuso wemvula ephezulu kakhulu, ngakho-ke, amandla elanga awasebenzi kahle, wethule isu lokuthuthukisa amandla e-biomass. Umphumela webhalansi ukuthi Ekupheleni konyaka we-2017, ukufakwa kwama-boilers we-biomass angaphezu kwama-4.000 emakhaya kuzabe sekusekelwe.
Isu Lokukhuthaza I-Biomass
Kubalwa ukuthi izinzuzo zokonga bonke labo abahlomula ngaleli Qhinga abazoba nazo zingafinyelela ezigidini ezingama-3,2 zamaRandi kusikweletu saminyaka yonke, ngaphandle kwamalitha ayizigidi eziyisishiyagalombili kadizili. Lokhu kuzosiza ekwehliseni amathani angama-24000 e-CO2 emkhathini.
Ugesi ophehlwa ngamanzi
U-Iberdrola uqede ngonyaka odlule ukunwetshwa kwesakhiwo esikhulu samandla kagesi eGalicia, ngemuva kokukhishwa kwesikhungo esisha iSan Pedro II, kuvulwe ngumongameli wenkampani kagesi, u-Ignacio Galán, kanye nomongameli weXunta de Galicia, eSil Basin, eNogueira de Ramuín (Ourense).
Ukuthunyelwa kwalesi sikhungo kuhilela ukunwetshwa kwesakhiwo samandla kagesi iSanto Estevo-San Pedro, esenziwe kusukela ngo-2008 nalapho Izigidi ezingu-200 futhi cishe abantu abangama-800 banikezwe imisebenzi.
Inhlabathi yaseGalician icebile, ikhiqiza izimbali namathafa ahlukile, kepha inhlabathi engaphansi nayo ihlukile ekugcineni kwengcebo, ezindaweni eziningi izikhathi zokuchitha. Ngokwengeziwe kokushisa okushisayo, kufanele sengeze ingcebo ye-geothermal.
Ngokuya ngocwaningo oluningana, iGalicia ingahola i- inguquko entsha ekusetshenzisweni kwamandla we-geothermal, hhayi nje njengomthombo wokushisa kepha futhi njengomthombo wokukhiqiza ugesi.
Namuhla, i-geothermal yaseGalician isivele ingumholi wezwe. Ngokuya ngemininingwane evela ku-Acluxega (Association of the Xeotermia Cluster of Galicia), umphakathi ngo-2017, isibalo sezinhlelo eziyi-1100 umoya opholile ngempompo yokushisa. Lesi sibalo, i-miniscule uma siyiqhathanisa namazwe amakhulu ezwekazi laseYurophu, kodwa umuntu oholayo ezingeni laseSpain.
Mayelana namandla inani elifakiwe elishisayo, kulinganiselwa ukuthi ekupheleni konyaka wezi-2016 eGalicia isibalo sama-megawatt angaba ngu-26 sifinyelelwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » Amandla avuselelekayo » IGalicia ifuna ukuhola ekukhiqizeni amandla avuselelekayo eSpain